မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ပီတိကိုစား ခါးချိပါ၏...
Posted by mabaydar at 3:14 PM
ကောင်းပါ၏။ လက်စလက်နရှိတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာ။
12/19/2008 7:54 PM
မဗေဒါတစ်ယောက်ဒီလောက်လုပ်တတ်လိမ်မယ်လို့ မထင်မိဘူး။ very good
12/19/2008 9:10 PM
WOOWWW !!! PERFECT !!!!
အရမ်းကောင်းတာပဲ.. တကယ်ရောက်သွားသလိုပဲ ဂျပန်ကို.. စိတ်ကူးအရမ်းကောင်းတယ်နော်...
ကျွန်တော်လဲ ခရီးသွားရင်း ဓာတ်ပုံရိုက် ဗွီဒီယိုရိုက်တာ အရမ်းဝါသနာပါတာ... ဟီး... တူနေပြီ....
12/19/2008 9:15 PM
စားချင်တယ် ဂလု :P
တကိုယ်တော် ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေးမှ နောက်ထပ် ဇာတ်ကားများကို စောင့်မျှော်နေပါမည်...း)
12/20/2008 3:33 AM
မဗေဒါရေ...ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီး အပျော်တွေတောင်ကူးစက်သွားတယ်။ မဗေဒါက အတော်ပျော်တတ်တယ်နော်။
MrDBA - နောက်ဆက်တွဲအပိုင်းတွေကျန်သေးတယ်..
ကိုထိုက် - ဒီလောက်လဲ မဟုတ်သေးပါဘူး.. ဟဲ ဟဲ.. ခုပီတိတွေစားတော့ ခါးချိရကျိုးနပ်ပြီ..
ကိုနေလင်း - အင်း.. ခရီးသွားရင်း အပင်ပန်းခံမှတ်တမ်းတင်တော့ နောင်မှာ မှတ်တမ်းကျန်တာပေါ့ အကိုရယ်.. ရိုက်သာရိုက်..
ကိုအောင်သာငယ် - မကြာမီ (အဲ.. ခုထက်ထိတော့ မစရသေးဘူး) လာမည်.. မျှော်.. ကျေးဇူးရှင့်..
ယောနသံစင်ရော် - မသိလို့ရှင့်.. မဗေဒါမှာ အဆွေးဓာတ်ခံလေးလဲရှိပါတယ်.. ဟီး.. ဟီး..
sin dan lar ရေ ကျေးဇူး very much ပါ.. ဟတ်.. ဟတ်.. ၄ ယောက် rating ပေးပြီးသွားပြီ.. အဟေး ဟေး
ပီတိတွေချား အားရှိပါ၏။ ဒါရိုက်တာဂျီးရေ.. လာရှုသွားတယ်.. ခရီးသွားမှတ်တမ်းလေးပေါ့.. ကောင်း၏။ (အသံကျယ်လွန်းတယ်..) :) ဒါပေမယ့် ကျန်တာ အကုန်ကောင်းပါတယ်..။ နောက်လဲတင်ပေးအုံးနော်.. အားပေးမယ်။
12/20/2008 12:25 PM
ကျနော် မနေ့ကတည်းက ကြည့်တာဗျ
တယ်ဟုတ်ပါလား။ ဟဲဟဲ တော်တော်လေးတော့ ရယ်၇တယ်။ ဟိဟိ
Keep It Up ... It's Perfect.
I have tried before so that I know how hard to shoot Video by yourself while we are travelling.
12/21/2008 1:27 PM
12/22/2008 3:27 PM